New iPad Mini, Apple's mini inova Pro | IPhone nhau
Nezuro, Apple yakabata iyo Keynote munaGunyana 2021. Iyo Keynote iyo inogara yakanangana nekutangisa kwe iPhone neApple Watch uye ndozvazadzikiswa. Rudzi rutsva rwe iPhone 13, uye inotarisirwa Apple Watch Series 7 yakati decaffeinated yekusaunza dhizaini nyowani. Asi Apple yaidawo kutishamisa nechimwe chinhu: iyo nyowani iPad Mini. Iyo ipad nyowani yezvidiki zvidimbu iyo inowana dhizaini yemutsva mutsva iPads yePro renji. Ramba uchiverenga kuti isu tinokuudza iwe zvese zvese ...
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, iyo Mini Mini inodzokera kunhau dzedu uye inoita nenzira yakanakisa. Pane dzakawanda nguva isu tataura nezve kuita kwakawanda sei iyo Mini Mini iri, iyo iPad yakakwana kuitakura muzuva redu kusvika zuva uye kunyanya pakuenderana kwayo neApple Penzura. Apple yakatiunzira zvataida: Apple Mini ine iPad Pro dhizaini, dhizaini iyo nenzira yaive yatove neazvino iPad Mhepo, uye izvo zvino zvinouya kune yakadzikiswa (uye inochinjika iPad) vhezheni.
Screen yekumucheto-kumucheto ine matete mativi nemakona akapoteredzwa, 8,3 inches. Zvese zvacho inodzivirirwa ne100% yakadzoreredzwa aluminium dzimba inowanikwa muSpace Grey, Pinki, Pepuru, kana Nyeredzi Chena. Iyo skrini (500 nits) nenzira inoenderera neTechnology Tone tekinoroji uye a yakafara ruvara gamut iyo inoderedza iwo maratidziro uye inotibvumidza isu kuva nemavara akajeka uye akapinza zvinyorwa.
Uye kana yapfuura iPad Mini yaienderana neyekutanga chizvarwa Apple Penzura, panguva ino Apple inoita kuti ienderane neyechipiri-chizvarwa Apple Penzura (inotengeswa zvakasiyana ne $ 135), Penzura inosunga magineti kudivi rePad Mini uye inotobhadharisa zvisina waya.
Kutevera kufarira kwaApple kuchengeteka, mune ino nyaya vanotevera tsoka dzeazvino iPad Mhepo uye sanganisira Kubata ID pane bhatani repamusoro rePad Mini. Yekubata ID iyo yakawanda inoda kuona pane iyo iPhone asi zvinoita sekunge haife inopera kuuya. Uye iwe, unosarudza Kubata ID kune Face ID?
Zvakanaka, isu takatarisana nePad Mini Mini nekukanganisa uko kunosanganisira, chokwadi ndechekuti Apple yanga ichida kuisa makadhi ayo patafura uye yatora iyo Mini Mini kuenda padanho repamusoro. Zviripachena haina kusanganisira iyo M1 processor yeiyo Pro Pro, asi mune ino nyowani iPad Mini isu tine iyo nyowani A15 Bionic, processor iyo nenzira inokwira muiyo iPhone 13 uye 13 Pro. Imwe Matanhatu-epakati CPU anovimbisa kuve 40% nekukurumidza uye kuti ichava naye Apple yeNeural Injini izvo zvichavandudza kumhanya kwevamwe kufambiswa kwemabasa. Nenzira, sekureva kwaApple, iyo Mini Mini ine Shanu-musimboti GPU, Yakakwana yekumhanyisa mitambo yakanakisa, kana kuitora kune iyo muganho mune ekushandisa ekushandisa.
El USB-C inogadzira kutaridzika kwayo kune ino Mini Mini seye chete chiteshi, ichatibvumidza kuti tiibhadharise kana kushandisa chero chishongedzo chinoenderana neUSB-C (kunyangwe ekunze madhiraivha akaomarara). Uye maererano nekubatana, Apple yanga ichida kuunza iyo Mini Mini padanho reiyo nyowani iPhone 13: Kubatana kwe5G uye chizvarwa chechitanhatu Wi-Fi, chinobatanidza chinokurumidza pamusika.
Ini handizotarisisa zvakanyanya pazvinhu zvekhamera, Ini handisati ndambove mutsigiri wePads kameraKunyangwe iwe ungazoshamisika kuti vangani vanhu vanoshandisa maPads avo semakamera makuru. Izvo zvinoshamisa shanduko yekamberi kamera inosvika gumi nemaviri megapikisheni ine Ultra yakafara kona, uye sezvataona mune mamwe maPads tichava neiyo yakatarisana nekuratidzira iyo ichatibvumidza isu kuvandudza edu evhidhiyo mafoni. Iyo yekumashure kamera zvakare inovandudza nehupamhi kona iyo ichaita zvishoma kuvandudza edu mapikicha uye kunyange kuongorora magwaro.
Iyo iPad Mini iyo yatinogona kutochengeta pane iyo Apple webhusaiti uye kuti tinogona gamuchira Chishanu chinotevera, Gunyana 24. Zvese pamutengo we € 549 mune yayo yakachipa sarudzo (64 GB muWifi vhezheni), inosvika ku € 889 mumutengo wayo wakakura (256 GB muWifi + 5G vhezheni). Yakakura sarudzo yekutarisa kana iwe uchifarira mudziyo wakanyanya kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » New iPad Mini, Apple's mini inoenda Pro